Hanara-maso anao ny Apple Watch raha tsy misy ny iPhone | Avy amin'ny mac aho
Apple Watch dia mampiasa ny Wi-Fi sy GPS avy amin'ny iPhone, ankoatry ny sensor-ny ho an'ny accelerometer, ny gyroscope, ny tahan'ny fo, ny barometre, ny fanaraha-maso ny hetsika ara-batana sy ny hetsika ataonao. Betsaka ny fisavoritahana, raha tsy misy ny iPhone eo akaikiny, afaka miasa tsy miankina ny Apple Watch toy ny tracker fitness.
Araka ny nomarihin'i MacObserver, ilay maodely sy mafana fo, Christy Turlington-Burns, izay mitoraka bilaogy momba ny Apple Watch ao amin'ny tranonkalan'i Apple, dia nilaza tao amin'ny lahatsorany farany, fa afaka mianatra momba ny dian'ny mpampiasa ny fitaovana, raha efa nampiasainao hatry ny ela izy io, mba hanarahana tsara ny fanazaran-tena tsy misy iPhone.
Rehefa avy nihazakazaka ny Apple Watch sy ny iPhone indroa ianao dia nahalala bebe kokoa momba ny dingana nataonao ilay fampiharana 'Training', hoy ny nosoratan'ilay mpikatroka mafàna fo Christy Turlington-Burns. Azonao atao ny mihazakazaka amin'ny treadmill na ivelany raha tsy misy ny telefaoninao ary mbola mahazo famintinana fampihetseham-batana tena marina.
Amin'ny maha-olona mandeha amin'ny gym matetika dia ho hitako izany tena tsy mahazo aina mihazakazaka eo amin'ny fitoeran-tongotra, manao push-ups sy dabilio miaraka amina takelaka goavambe ao am-paosiko.
Amin'ny maha tompona iPhone 5S ahy dia manahy momba ilay fitaovana foana aho sendra miala tsy ho eo am-paosinao ary tsy maintsy mifandray tsy tapaka amin'ireo fampiharana fanatanjahan-tena eo aminy.
Famantaranandro misy sensor amin'ny tahan'ny fo, izay manara-maso mitohy pulsa, raha mitazona ny zava-drehetra momba ny hazakazako sy ny fampihetseham-batana voatahiry raha mbola ao anaty fitoeram-baravarako ny iPhone, dia manidy ny tsy fahazoana aina sy fisalasalana momba ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Hanara-maso anao tsy misy ny iPhone ny Apple Watch
Raha hividy Apple Watch volamena ianao dia tsara vintana